Photo Feature – Page 13 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
देजमोको टोखा नगरले कार्यालय उद्घाटन गर्दै घोषणा ग¥यो उम्मेदवारहरू (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा टोखा नगर कमिटिले मोर्चाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै टोखा नगरमा मेयर, उपमेयरलगायत ११ वटै वडामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । साेमबार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले मोर्चाको कार्यालय उद्घाटन गरे । मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाको मेयरमा केशर प्रधान, उपमेयरमा छिरिङ अंगु […]
जिल्ला, गाउँ÷नगर हुँदै वडासम्म फैलँदैछ देजमो
काठमाडौं । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न त्यसको तयारी स्वरुप नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले क्रान्तिको तीन जादुगरी हतियार– पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चाको अवधारणा अन्तर्गत गठन गरेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले छोटै अवधिमा देशव्यापी रुपमा संगठनको जालो फिंजाएको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मोर्चामार्फत् ‘क्रान्तिकारी उपयोग’ गर्ने […]
Posted in: Feature News, mainNews, National News, Photo Feature, Politics
लम्पसारवादी प्रचण्ड सरकारले गोविन्द गौतमको हत्यामा भारतलाई माफी मगाउन सकेन : गजुरेल
झापा । क्रान्तिकारी युवा लिग, झापाको दोस्रो जिल्ला भेलालाई शनिवार सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का बरिष्ठ नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले कंचनपुर हत्याकाण्डमा सरकारले भारतलाई माफी मगाउन नसक्नु र चुँ सम्म बोल्न नसक्नुले यो सरकार कतिसम्म लम्पसारवादी छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताएका छन् । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै गजुरेलले नेपाली जनताले […]
यी हुन् सत्ता हल्लाउने शक्तिशाली शासकका छोरी (फोटो फिचर)
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्कालाई ह्वाइट हाउसमा छुट्टै कार्यालय दिइएको छ । उनले अब त्यो कुर्सीबाट आफ्ना बाबुलाई काममा सघाउन र सल्लाह दिने काम गर्नेछिन् । ३५ वर्षकी इभान्काले अब डोनाल्ड ट्रम्पका आँखा र कानको रुपमा काम गर्नेछिन् । तर उनलाई काम गरेवापत ह्वाइट हाउसबाट तलब भने पाउने छैनन् । पूरै संसारमा […]
Posted in: mainNews, Photo Feature
मार्चपासमा हजारौं क्रान्तिकारी युवाहरु निस्किए सडकमा (फोटोफिचर)
काठमाडौं । ‘कञ्चनपुर र सप्तरी हत्याकाण्डको विरोध गरौं ! राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनअधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरौं !!’ भन्ने मूल नाराका साथ साँस्कृतिक प्रतिरोध दिवस तथा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमन्तर्गत आज अर्थात् चैत्र ५ गते नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को युवा संगठन ‘क्रान्तिकारी युवा लिग’को नेवा राज्यको आयोजनामा हजारौं युवाहरु मार्चपासमा सहभागी बनेका छन् । पूर्व निर्धारित […]
रेल लाईनमा फोटो शुट गराउँदा गर्भवती मोडलको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकाको टेक्सासमा एक मोडलको रेलवे लाइनमा फोटो शुत गराउने कोशिस गर्दा दुर्घटनाको शिकार भएकी छन् । १९ वर्षीय फ्रेजानिया थोम्पसनको नेवासोटामा रेलवे लाइनमा फोटो खिचाइरहेका बेला आएको रेलले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको हो । रेलवे लाइनमा उभिएकी उनको अन्तिम तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरस भएको छ । स्थानीय प्रहरीका अनुसार फ्रेजानिया दुर्घटनाको समयमा […]
Posted in: Bollywood, Hollywood, Manoranjan, Photo Feature
क्रान्तिकारी माओवादी निकट अनेमसंघ (क्रान्तिकारी)को भव्य राष्ट्रिय भेला (फोटोफिचर)
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर आफ्नो राष्ट्रिय भेलामा जुटेको छ । काठमाडौंको सुन्धराबाट ¥यालीसहित क्रान्तिकारी महिलाहरु ललितपुरको कुपण्डोलमा पुगेर भेलाको उद्घाटन जुटे । भेलाको क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले उद्घाटन गरे । देशैभरिबाट आएका सैयौं महिलाहरुको उपस्थितिमा भएको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता संगठनकी संयोजक […]
रक्तचापका विरामीका लागि फाइदाजनक हुन्छन्, यी खानेकुरा
काठमाडौं । आम मानिसका लागि रक्तचाप यस्तो साझा समस्या बनेको छ । तर हालै भएको एक अध्ययनका क्रममा यस्तो पत्ता लागेको छ कि केही यस्तो वस्तु छन्, जसको नियमित सेवनले यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । केरा : यसमा पोटासियम हुन्छ, साथै भिटामिन बी सिक्स, विटामिन सी र म्याग्नेसियम पनि हुन्छ । धनिया : धनियाका पातमा […]
Posted in: Jiwan saili, Photo Feature
सामना साँस्कृतिक परिवारका कलाकारद्वयको ‘जनवादी विवाह’ (फोटोफिचर)
ललितपुर । माओवादी जनयुद्धसँगै जन्मिएर स्थापित बनेको सामना साँस्कृतिक परिवारका कलाकारद्वय अनिश योञ्जन र रुषा जिम्बाबीच शनिबार ललितपुरको कुपण्डोलमा जनवादी विवाह सम्पन्न भएको छ । जनयुद्धले नै स्थापित गरेको ‘जनवादी विवाह’को संस्कृतिलाई अँगाल्दै कलाकारद्वय योञ्जन र जिम्बाले जनवादी विवाह गरेका हुन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न विवाहमा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय […]